कोरोना भाइरसवाट नेपालमा छैटौ व्यक्तिको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि
१६ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट नेपालमा थप १ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार ब्रिफिंग गर्दै प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सो कुराको पुष्टि गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार जेठ १० गते भारतबाट नेपाल आउने क्रममा मृत्यु भएका अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका ३५ वर्षीय पुरुषको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो । उनको पीसीआर परीक्षणको पोजिटिभ रिपोर्ट हिजो बिहीबार मात्र आएको उनको भनाइ छ । साथै उनको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
नेपालमा ६ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भईसकेको छ । यसअघि नेपालमा सिन्धुपाल्चोकमा १ जना, बाँकेमा १ जना, गुल्मीमा १ जना, बारामा १ जना र ललितपुरमा १ जना गरी ५ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भईसकेको थियो ।
कोरोना भाइरसवाट नेपालमा पाँचौ व्यक्तिको मृत्यु पुष्टि